ပျော်ရွှင်သော ခရီးလမ်း – Grab Love Story
သူရလည်း ခရီးလမ်းတစ်လျောက် အချိန်တော်တော်ကြာအောင်တွေးလိုက်တာ နောက်ကနေ ပုခုံးကို လာပုတ်မှ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူရ သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ”လာလေကွာ…။ မင်းမလည်း အလွမ်းသယ်နေတာနဲ့ မပြီးတော့ဘူး။ ငါတို့က မင်းကိုစောင့်နေတာ။ ဒီမှာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး။” ”အေးပါကွာ။ လာပါပြီ။” သူရ စိတ်ကိုတစ်ချက်တင်းပြီး အလုပ်တွေကို ဆက်ပြီးလုပ်လိုက်သည်။ ကားငှားတာ၊ ကားသမားနဲ့ စာချုပ်ချုပ်တာ၊ ခရီးစဉ်ရွေးတာတွေအားလုံး သူရ တစ်ယောက်ထဲ ဦးဆောင်ပြီးလုပ်ထားတာဖြစ်လို့ ကိစ္စတော်တော်များများ သူရမပါလို့မပြီးဖြစ်နေသည်။ ထိုင်ခုံနေရာတွေအားလုံးချထားပေးပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ယူစရာရှိတာတွေ အားလုံးမမေ့ကျန်ခဲ့အောင် အကုန်လုံးလိုက်စစ်ရသည်။ သူရ တို့သွားရတဲ့ မြို့က မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော် အနီးမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့။ ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင်တော့ မော်လမြိုင်နဲ့ မိုင်ခြောက်ဆယ်လောက်ဝေးတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။ သူရတို့ အဲဒီမြို့ကိုရောက်တော့ ဆေးရုံအုပ်က အစည်းအဝေးရှိလို့ နေပြည်တော်သွားတာ ငါးရက်လောက်ကြာမည်ပြောသည်။
သူရတို့လည်း လုပ်စရာအလုပ်တွေ မပုံသေးခင် ခဏနားပြီး အနားတစ်ဝိုက်လျောက်လည်ဖို့ပြင်သည်။ မော်လမြိုင်ကို တစ်ရက်သွားလည်ကြမည်။ ပြီးတော့ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဖူးမည်။ အပြန်မှာ ဗျိုင်းနှစ်ကောင်ကိုဝင်၊ ဘုရားဖူးပြီး နောက်ဆုံး စက်စဲကမ်းခြေမှာ စခန်းချကြမည် လို့ အစီအစဉ်တွေဆွဲထားသည်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ခရီးပန်းတာရယ်၊ အဖွဲ့သားအားလုံးစည်းစည်းလုံးလုံးရှိအောင်ရယ်ကြောင့်၊ သုံးရက်လောက် ဆေးရုံကပေးတဲ့အဆောင်မှာပဲနားနေကြသည်။ အလာတုန်းက လမ်းမှာ ခရီးတစ်ထောက်နားရင်း ထမင်းစားတော့ သူရတို့ အဖွဲ့ထဲက အချောဆုံးရှမ်းမလေးက သူရကို မကြာမကြာ ခိုးခိုးကြည့်တာတွေ့သည်။ သူရ မသိချင်ယောင်ဆောင်ရင်းဘာသိဘာသာနေခဲ့သည်။ ဟိုကိုရောက်မှ အဖွဲ့သားအားလုံးထမင်းတူတူစား၊ အတူတူသွား၊ နီးနီးကပ်ကပ်နေတော့မှ နန်းကလျာခမ်း အရမ်းချောကြောင်း သူရ သိရတော့သည်။ အသားလေးတွေက ဖြူဖွေးဆွတ်နေပြီး၊ပါးအို့လေးတွေကနီရဲနေသည်။
နှာခေါင်းချွန်ချွန်လေးနှင့် နှင်းဆီရောင် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတို့က မြင်သူတိုင်းကို ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာစေနိုင်သည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလည်းပြောဖွယ်ရာမရှိ။ ရှမ်းတရုတ်မလေးပီပီ ရင်သားအစုံက ဘလောက်အသားပျော့ပျော့အောက်မှာ တင်းမို့နေသည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီကျပ်ကျပ်အောက်က တင်သားထွားထွားကလည်း မြင်ရသူယောက်ျားလေးတိုင်း နှစ်ခါပြန်ပြီးလှည့်ကြည့်လောက်သည်။ ဒီလောက် ရုပ်ကလည်းချော၊ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လည်းတောင့်တင်းတဲ့ ရှမ်းတရုတ်မချောချောလေးကို သူရဘာလို့ရင်မခုန်ခဲ့မိမှန်း သူရကိုယ်တိုင်လည်းပြန်ပြီးအဖြေရှာလို့မရခဲ့ပေ။ တစ်ခုရှိတာ နန်းကလျာခမ်းက ယောက်ျားလေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ အီတတ်တယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေမကြာခဏပြောတာကိုကြားဖူးတာကြောင့် စိတ်ထဲမှာ အာရုံမလာတာပဲဖြစ်မည်။ ဒီကိုရောက်တော့လည်း သူရ မမရွှေစင်ရဲ့ ဖုန်းထဲက အသံချိုချိုအောက်မှာပဲ မင်္ဂလာရှိတဲ့ နေ့ရက်သစ်တွေကို ဖြတ်သန်းဖြစ်သည်။ နေ့လည် ထမင်းစားနားချိန်မှာလည်းတစ်ခါဖုန်းဆက်သည်။ ညဘက်ဆိုရင် ဆေးရုံရှေ့က ခုံတန်းလေးမှာပဲ လမင်းကြီးရဲ့ အလှအပတွေကိုခံစားရင်း မမရွှေစင်နဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်သည်။ ဒုတိယနေ့မှာ မမရွှေစင်နဲ့ ဖုန်းပြောပြီးလို့ ခုံတန်းလေးမှာ သူရတစ်ယောက်ထဲထိုင်နေမိသည်။ ”ဟိတ်… တစ်ယောက်ထဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။ ” စကားပြောသံနဲ့ အတူ ည၀တ်အကျီလေးနဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဘေးမှာလာထိုင်သည်။
သူရ ဘေးကို စောင်းငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ လရောင်အောက်မှာ လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ နန်းကလျာခမ်း။ ”နန်းကလျာခမ်း၊ နင်မအိပ်သေးပဲ ဒီမှာ ဘာလာလုပ်တာလဲ။ ညဥ့်နက်နေပြီ။ သွားအိပ်တော့။” ”နင်ကလဲ…၊ ငါအိပ်မပျော်သေးလို့ပါဟ၊ ငါ့ကို နန်းကလျာခမ်း ၊ နန်းကလျာခမ်းနဲ့မခေါ်ပါနဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေခေါ်သလို ကလျာလို့ ပဲ ခေါ်စမ်းပါဟာ။” ”မခေါ်ချင်ပါဘူးဟာ။ ကလျာဆိုတာ ငါကြားဖူးတဲ့ သွေးဆေးနာမည်ကြီး၊ ခွိ…။” ”အမ်…။ နင်ပြောမှ ငါ့နာမည်အလန်းလေးလည်း သွေးဆေးဖြစ်တော့မယ်။ ဒါဆိုလည်း ငါ့အိမ်က ခေါ်သလို ခမ်းလေး လို့ပဲခေါ်လေ။ ဟုတ်ပြီလား။” ”ခမ်းလေး၊ ခမ်းလေး။ အေး… မဆိုးဘူး။ ငါနင့်ကိုခမ်းလေးလို့ပဲခေါ်မယ်။” ”အေး….။ ပြီးတာပဲ။ သူရ နင်ငါ့ကိုသွေးဆေးနာမည်ကြီးလို့ သူငယ်ချင်းတွေရှေ့မှာ မခေါ်ရဘူးနော်။’ ‘ ”မခေါ်ပါဘူးဟာ…။ နင်ကလည်း ….။ ” သူရ တစ်ယောက် ရှမ်းတရုတ်မချောချောလေး နဲ့ ညတစ်နာရီထိုးလောက်ထိ စကားတွေပြောဖြစ်ကြသည်။ သူရ မိဘတွေအကြောင်း၊ ခမ်းလေးရဲ့မိဘတွေအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ကြိုက်တတ်တဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းပြောကြသည်။ သေသေချာချာစကားပြောကြည့်မှ နန်းကလျာခမ်းသည် ရုပ်ရည်ချောမောသော်လည်း မာနမကြီးပဲ ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သူရသိခဲ့ရသည်။
အဲဒီည က နန်းကလျာခမ်းကို သူတို့အိပ်တဲ့ အဆောင်တံခါးဝအထိလိုက်ပို့ပေးရသည်။ မိန်းကလေးတွေနေတဲ့ အဆောင်က ယောက်ျားလေးအဆောင်နဲ့ ဝေးပြီး ဆေးရုံနောက်နားထိတော်တော်လေးဝေးသည်။ သူရတို့နေတဲ့ဆေးရုံက ဘာမှလိုလေသေးမရှိပဲ အစစအရာရာပြည့်စုံသည်။ တစ်ခုပဲရှိသည်။ မိန်းကလေးတွေနေတဲ့အဆောင်မှာ ရေချိုးခန်းအိမ်သာမပါပဲ အိမ်သာသွားချင်ရင် ဆေးရုံနောက်မှာရှိတဲ့ အိမ်သာကိုသွားရတာဖြစ်သည်။ အိမ်သာက မိန်းကလေးအဆောင်နဲ့ ပေငါးဆယ်လောက်ဝေးပြီး ညဘက်ဆိုရင် မီးမရှိတာကြောင့် မိန်းကလေးတွေညရေးညတာ သွားချင်ရင် သုံးလေးယောက်စုပြီး သွားကြရသည်။ သရဲကြောက်တတ်သောကြောင့် တခါတလေ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်သုံးယောက်ကိုဖုန်းဆက် ခေါ်တတ်သည်။ ယောက်ျားလေး နှစ်ယောက်သုံးယောက်စီ အလှည့်ကျသွားသွားစောင့်ပေးရတာ တာဝန်တစ်ခုလိုဖြစ်နေသည်။ သူရ ညတိုင်းလိုလို နန်းကလျာခမ်းနဲ့ စကားတွေပြောဖြစ်သည်။ စကားနည်းနည်းဝဲပေမဲ့ စကားပြောကောင်းတဲ့ ရှမ်းတရုတ်မလေးရဲ့ စကားသံတွေကြားမှာ သူရ အရည်ပျော်ခဲ့သည်။ လက်ဟန်ခြေဟန်လေးတွေနဲ့ စကားပြောတတ်သည့် နန်းကလျာခမ်းသည်။ လရောင်အောက်မှာ နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလိုပင်လှပနေသည်။ နန်းကလျာခမ်း စကားပြောတာကိုနားထောင်ရင်း သူရ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို စုပ်ပြီးနမ်းချင်စိတ်ကိုမနည်းအောင့်အီးထားရသည်။
သူ့မှာ အသည်းနင့်အောင်ချစ်ရတဲ့ မမရွှေစင်ရှိပြီးပြီမဟုတ်ပါလား။ နန်းကလျာခမ်းနဲ့ ညဥ့်နက်အောင် ရောက်တတ်ရာရာတွေပြောပြီးတိုင်း မိန်းလေးတွေနေတဲ့ အဆောင်ရှေ့အထိ နန်းကလျာခမ်းကို သူရလိုက်ပို့ရသည်။ ”သူရ….. ခဏလေး။” ”ဟင်…။ ဘာလို့လဲ ခမ်းလေး။” ”ငါအပေ့ါသွားမလို့ လိုက်စောင့်ပေးပါလား။ မနေ့ညက ငါပြန်ရောက်တော့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေက အိပ်ပျော်သွားကြပြီ။ ငါလဲမနိုးချင်တာနဲ့ အောင့်ပြီး အိပ်လိုက်ရတယ်။” ”ဟုတ်လား။ အဲဒါဆို နင် မနေ့က အေသင်ချိုဆွေဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဟုတ်လား။” ”ဘာလဲ။ အေသင်ချိုဆွေဆိုတာ။” ခမ်းလေးကမေးသည်။ ”အော်… အေသင်ချိုဆွေဆိုတဲ့သီချင်းလိုလေ။ တင်းတယ် တင်းတယ်… ၊ တင်းတယ် … တင်းတယ်ဟေ့ ဆိုတာ။ နင်လဲ တစ်ညလုံးတင်းနေမှာပေါ့ ။ ဟီးဟီး…” ”ဟွန်း…. နင်ပဲအရမ်းပြောတတ်တယ်။ ဓာတ်မီးပေး၊ အဝေးကြီးမသွားနဲ့နော်။ ဒီနားမှာပဲစောင့်နေ။” ”အေးပါ။ ခမ်းလေး.. တင်းနေတာတွေအားရအောင်သာလျော့ခဲ့တော့။” နန်းကလျာခမ်း သူရကို မျက်စောင်းတစ်ချက် ထိုးပြီး အိမ်သာထဲဝင်သွားသည်။
နန်းကလျာခမ်း အိမ်သာထဲမှာထိုင်ရင်း သူ့ကိုအပြင်မှာစောင့်ပေးနေတဲ့သူရအကြောင်းတွေးမိသည်။ သူရအကြောင်းတွေးလိုက်တိုင်း နန်းကလျာခမ်း ရင်ခုန်သံတွေမြန်လာစမြဲပင်။ ဒီညလဲ သူရနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်စကားပြောရင်း သူရ မျက်လုံးတွေက သူမည၀တ်အကျီလေးအောက်က ရင်သားလုံးလုံးလေးတွေကို မကြာမကြာခိုးခိုးကြည့်တာတွေ့သည်။ သူရ သူမနို့တွေကို ခိုးခိုးကြည့်တာသိပေမဲ့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး နေခဲ့သည်။ သူမနို့တွေကလည်း သူရခိုးကြည့်ရလောက်အောင် သူများထက်ပိုပြီးကြီးနေတာကိုး။ ရာသီလာခါနီးမို့လို့ နို့သီးတွေတင်းမာပြီး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကလည်းကော့ချွန်နေသည်။ ဘော်လီကြပ်ကြပ်ဝတ်ရင် နာသလိုလိုရှိတာကြောင့် ဘော်လီ ပါးပါးပျော့ပျော့ နဲ့ ချောင်တာကိုရွေးပြီး ၀တ်ခဲ့သည်။ အဲဒါကြောင့် အရင်နေ့တွေထက် သူမရင်သားတွေက ပိုကြီးသလိုဖြစ်ပြီး သူရ လိုက်ကြည့်နေတာလားမသိပေ။ သူမနို့တွေကို သူရခိုးကြည့်တာသိတော့ နန်းကလျာခမ်း အလိုလိုပင်စိတ်တွေကြွလာမိသည်။ နန်းကလျာခမ်း အိမ်သာထဲက ထွက်ခါနီး ည၀တ်ဘောင်းဘီလေးရဲ့ ပိပိနေရာလေးကိုစမ်းကြည့်တော့ ဘောင်းဘီဂွကြားမှာ အရည်လေးတွေစိုနေတာတွေ့သည်။ သူမ ရာသီလာခါနီးတိုင်း ဒီလိုပဲ စိတ်တွေကြွလာတတ်သည်။ သူရ နန်းကလျာခမ်း အပေါ့သွားတာကို အိမ်သာအပြင်မှာစောင့်ရင်း စိတ်တွေကြွနေမိသည်။
ဒီနေ့ နန်းကလျာခမ်းဝတ်လာတဲ့ အကျီကတော်တော်လေးပါးသည်။ အောက်ကနို့သီးခေါင်းနေရာလေးတွေမှာ ဖုနေတာလေးကို လရောင်အောက်မှာတွေ့ရသည်။ နန်းကလျာခမ်းနဲ့ စကားပြောရင်း သူရအောက်က ညီတော်မောင်က တော်တော်လေးကို ဆန္ဒပြနေသည်။ ညီတော်မောင်လဲ နားနေရတာတော်တော်ကြာတော့ အလုပ်လုပ်ချင်ပြီထင်သည်။ တင်းနဲ့တဲ့ညီတော်မောင်ကို လက်နဲ့ဘဲလျော့ပေးလိုက်ဖို့ စဉ်းစားထားသည်။ ညီမလေးရဲ့အထိအတွေ့တွေကို ခံစားဖူးတာကြောင့် ညီတော်မောင်ကို ညီမလေးနဲ့ ပေးမလျော့ပဲ လက်နဲ့ပဲ လျော့ရမှာတော့ အားနာမိသလိုလိုခံစားရသည်။ ချောက်… ခနဲ တံခါးဖွင့်သံနဲ့အတူ နန်းကလျာခမ်းထွက်လာသည်။ နန်းကလျာခမ်းသူရကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြုံးပြရင်း သူရအနားကိုခပ်သွက်သွက်လျောက်လာသည်။
”ခမ်းလေး…။ နင်တင်းနေတာတွေ လျော့ပြီးသွားပြီလား။” ”အေး.. လျော့ပြီးပြီ။ နင်လဲလျော့ချင်လျော့လေ။ ငါစောင့်ပေးမယ်။” ”လျော့ချင်တာပေါ့ဟာ။ လျော့ချင်တာမှ နင့်ညီမလေးထဲကို အဆုံးထိသွင်းထားပြီး အားရပါးရလျော့လိုက်ချင်တာ။” သူရစိတ်ထဲက ပြောလိုက်ချင်းသာဖြစ်သည်။ အပြင်မှာတော့… ”ငါတို့ အဆောင်မှာ ရေချိုးခန်းအိမ်သာပါပြီးသားလေ။ နင်တို့လို တကူးတကသွားပြီးလျော့ဖို့မှမလိုတာခမ်းလေးရ..။ ဟဲဟဲ” ”ဟွန်း… သူရ…။ နင် အချင်းချင်းတွေကို လာကြွားနေတယ်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးပြန်လာမှ အဆောင်ချင်းလဲခိုင်းမယ်။” နန်းကလျာခမ်း တတွတ်တွတ်ပြောရင်း ဓာတ်မီးကိုင်ပြီးရှေ့ကနေဦးဆောင်သွားသည်။ သူရကတော့ နန်းကလျာခမ်းပြောတာကို ကြားတစ်ချက်၊မကြားတစ်ချက်နဲ့ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ဖင်လုံးလုံးလေးတွေကို ကြည့်ရင်းနောက်ကလိုက်လာသည်။ ”အောင်မယ်လေး….” နန်းကလျာခမ်းဓာတ်မီးကိုပစ်ချပြီး နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ သူရကို လှည့်ပြီးဖက်သည်။ သူရလည်း ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ တအားဖက်လာတဲ့ နန်းကလျာခမ်းကို အလိုက်သင့်ပြန်ဖက်ရင်း မေးလိုက်သည်။ ”ခမ်းလေး…။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။” ”မသိဘူး။ အကောင်ကြီး ငါ့ခြေထောက်ပေါ်ကဖြတ်သွားတယ်။ မြွေထင်တယ်။ ငါကြောက်တယ်သူရ….။” သူရ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်တော့ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွနဲ့တွေ့လိုက်ရတာက ဖားဂုန်ညင်းလေး တစ်ကောင်။ ”မြွေမဟုတ်ပါဘူးဟာ…။ ဖားပါ၊ နင်ကလဲကြောက်တတ်လိုက်တာ။ ဟားဟား…” ဖားပေါက်စလေးကိုကြောက်နေတဲ့ နန်းကလျာခမ်းကို ကြည့်ရင်း သူရ ရယ်မိသည်။ ”ဘာရယ်တာလဲ။ ဒီကတကယ်လန့်သွားတာကို ဟာသလာလုပ်နေတယ်။” နန်းကလျာခမ်း သူရရင်ခွင်ထဲကနေ ကမန်းကတန်းခွာလိုက်ရင်း မော့ကြည့်ပြီးပြောသည်။
သူရလည်း နှုတ်ခမ်းကိုစူပြီး ပြန်ပြောနေသော ရှမ်းတရုတ်မချောချောလေးကိုပြန်အကြည့် မျက်လုံးချင်းဆုံသွားပြီး အာခေါင်တွေခြောက်ကပ်လာသည်။ သူရ ရှေ့အနည်းငယ်တိုးပြီး နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ကိုယ်လုံးလှလှလေးကို တစ်ချက်ပွေ့ချီလိုက်သည်။ ”သူရ…. ဘာလုပ်တာလဲဟာ။ လူတွေမြင်…. မြင်…. ” နန်းကလျာခမ်းစကားဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရပေ။ သူရ နှုတ်ခမ်းအစုံက နန်းကလျာခမ်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို ငုံပြီးစုပ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူရ နန်းကလျာခမ်းကို ပွေ့ချီပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရေချိုးတဲ့အုတ်ကန်ကြီးရှိရာကို ခြေဦးလှည့်လိုက်သည်။ ဆေးရုံနောက်က အုတ်ကန်ကြီးက အတော်ကြီးသည်။ အုတ်ကန်ကြီးရဲ့ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာ သံမံသလင်းခင်းထားသည်။ အုတ်ကန်ထောင့်နားလေးမှာ အ၀တ်တွေတင်လျော်ဖို့ အင်္ဂတေလောင်းထားတဲ့ကျောက်ဖျာကြီး တစ်ချပ်ရှိနေသည်။ သူရ ရှမ်းမချောချောလေးနန်းကလျာခမ်းကို ကျောက်ဖျာကြီးပေါ်သို့ အသာအယာချပေးလိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ကျောပြင်က ကျောက်ဖျာပေါ်ကျသွားပြီးပြီးချင်းပဲ သူရရဲ့ နှုတ်ခမ်းများက နန်းကလျာခမ်းဆီသို့ရောက်သွားသည်။ ရောက်သွားတဲ့ နေရာက နန်းကလျာခမ်းရဲ့ လည်တိုင်နုနုဆီသို့….။ အမိုးမရှိတဲ့ ကျောက်ဖျာထက်က လရောင်အောက်မှာ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ လည်တိုင်ဖွေးဖွေးနုနုကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးစုပ်လိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ လည်ပင်းမှာ သူရလက်ချက်နဲ့ အနီကွက်လေးတွေဖြစ်သွားသည်။
သူရလက်တစ်ဖက်ကလည်းအငြိမ်မနေပဲ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ည၀တ်အကျီပါးလေးအောက်က နို့သီးလုံးလုံးလေးတွေကို ပွတ်နေမိသည်။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေက ထောင်ပြီးတင်းမာနေတာကို အကျီပေါ်ကပွတ်နေရင်းနဲ့ သူရ သိရသည်။ နန်းကလျာခမ်းစိတ်တွေထနေပြီ။ သူရ လက်ကို နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ပေါင်ကြားဆီကိုပို့လိုက်သည်။ ဘောင်းဘီဂွကြားလေးကရွှဲရွဲစိုနေသည်။ ”ဖြူရွှဲ ၊ ညိုစီး” ဆိုတဲ့စကားလိုပဲဖြစ်မည်။ နန်းကလျာခမ်းက အသားဖြူတော့အရည်တော်တော်ရွှမ်းသည်။ သူရဘာမှတောင်မလုပ်ရသေး..။ နန်းကလျာခမ်းကအရည်တွေရွှဲနေပြီ။ ”ခမ်းလေး… နင်အောက်မှာအရည်တွေရွှဲနေပြီနော်…။” ”အာ…. သူရ …. ကောင်စုတ်….။” နန်းကလျာခမ်းရှက်ရှက်နဲ့ သူရ ရင်ဘတ်ကို ခပ်ဖွဖွထုမိသည်။ ဒီအခြေအနေထိရောက်မှတော့ သူရကိုငြင်းဆန်ဖို့ နန်းကလျာခမ်းစိတ်မကူးတော့ပါ။ သူမကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလားပင်ခွင့်ပြုချင်စိတ်ပေါက်နေပြီမဟုတ်ပါလား။ သူရတစ်ယောက်နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှာ အုပ်မိုးထားရင်း နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အကျီလေးကို အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်သည်။ အပြာရောင်ဖျော့ဖျော့ ဘရာလေးအောက်မှာ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ နို့သီးအစုံက တင်းပြီးမို့နေသည်။ ဘရာလေးကသေးသေးလေးဖြစ်ပြီး နို့အုံထွားထွားကို မနိုင်မနင်းအုပ်မိုးနေရသလိုဖြစ်နေသည်။ သူရ ဘရာကို အပေါ်သို့လှန်တင်ဖို့မကြိုးစားပါ။ ရင်သားထွားသော မိန်းကလေးတွေမှာအပေါ်လှန်တင်ရင် နို့အုံနဲ့ ထစ်နေပြီး တော်တော်ဒုက္ခရောက်တတ်ကြောင်းသူရ သိသည်။ အဲဒါကြောင့် ဘရာလေးရဲ့ အကွဲကြောင်းဘေးကနေ ဘေးတစ်ဖက် တစ်ချက်ဆီကို တွန်းထုတ်လိုက်တော့ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ ရင်သားဖွေးဖွေးတစ်စုံက ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဖြူဖွေးဥနေတဲ့ ရင်သားတစ်စုံကို သူရ ခပ်ကြာကြာစိုက်ကြည့်မိသည်။
နို့သီးခေါင်းလေးတွေထောင်ထနေပုံက အသည်းယားစရာ..။ သူရ ခေါင်းငုံပြီး နို့သီးခေါင်းတစ်စုံကို တစ်လှည့်စီပြောင်းရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းငုံပြီး စုပ်လိုက်သည်။ ”အား… ရှီး….။” နန်းကလျာခမ်း သူမရဲ့ နို့တွေကို ငုံပြီးစုပ်နေတဲ့ သူရ ဆံပင်တွေကို ဖွရင်းခပ်တိုးတိုးငြီးမိသည်။ သူရ နို့နှစ်လုံးကို အားရအောင်စို့ပြီးတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကို ဆင်းလာသည်။ ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ အသာယက်ရင်း ချက်ပေါက်လေးဆီရောက်တော့ သုံးလေးချက်ကလိလိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ဗိုက်လေး အပေါ်ကိုမြင့်တက်လာပြီး နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးက အပေါ်သို့ ကြွတက်လာသည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ဖင်လေးကြွလာတာကို သတိပြုမိတာနဲ့ သူရ တစ်ယောက်ချက်လေးကို ဆက်ကာဆက်ကာ လျှာလေးနဲ့ ထိုးထိုးဆွလိုက်သည်။ နောက်တစ်ခါ နန်းကလျာခမ်းဖင်လေးကြွလာတုန်း ည၀တ်ဘောင်းဘီလေးကိုခပ်မြန်မြန်ဆွဲချွတ်လိုက်သည်။ ည၀တ်ဘောင်းဘီအောက်က ပန်းရောင်အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးက သေးသေးလေး….။ သူရ ရှမ်းမလေးရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ဖို့ မကြိုးစားတော့ပဲ အဖုတ်လေးနေရာမှာ ဘောင်းဘီစကို ဘေးကို တွန်းပြီးပေါ်လာတဲ့ အဖုတ်လေးကို လျှာနဲ့ အသာလေးယက်လိုက်သည်။ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများက စိနေပြီး အသည်းယားစရာကောင်းလှသည်။ သူရ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ချိုချဉ်စုတ်သလို ရှုးခနဲ့ တစ်ချက်စုတ်လိုက်တော့ နန်းကလျာခမ်းဖင်လေးကြွတက်လာပြန်သည်။ အဖုတ်လေးကို အသာဖြဲရင်း အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေကို လျှာနဲ့ လှည့်ပတ်ကလိလိုက်တော့ နန်းကလျာခမ်း တစ်ယောက် ပိုပြီး ကြွတက်လာသည်။
”သူရ…. လုပ်တော့ကွာ….။ တို့မနေနိုင်တော့ဘူးသိလား….။” နန်းကလျာခမ်း ပါးစပ်မှပင်ထုတ်ပြောမိသည်။ သူရ ဘောင်းဘီကို ခပ်မြန်မြန်ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ခေါင်းထောင်နေတဲ့ ညီတော်မောင်က အားရ၀မ်းသာထွက်လာသည်။ သူရ ကားကားလေးဖြစ်နေတဲ့ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ပေါင်ကြားထဲမှာ အသာလေးနေရာယူရင်း ညီတော်မောင်ရဲ့ ထိပ်ဖျားကို နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အဖုတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျောက် ဆယ်ချက်လောက်ပွတ်လိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းဆီက ထွက်တဲ့ အရည်ကြည်လေးတွေနဲ့ ညီတော်မောင်ရဲ့ထိပ်ဖျားကို စိုစွတ်အောင်လုပ်ပြီးတာနဲ့ အဖုတ်အ၀လေးကို တေ့ပြီး အသာထိုးထည့်လိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အဖုတ်လေးက နွေးပြီးစိုအိနေသည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အဖုတ်လေးက နူးညံ့ပြီး စီးစီးလေးဖြစ်နေသည်။ အဖုတ်လေးရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အရသာကိုခံစားရင်း တစ်ရစ်ရစ်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထည့်လိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းမျက်လုံးလေးမှေးပြီး ပါးစပ်ကလည်း တရှုးရှုးနဲ့ အသံလေးတွေထွက်နေသည်။ သူရ တစ်ရစ်ချင်းထိုးထည့်လိုက်တာ ညီတော်မောင်က အဖုတ်လေးထဲ အဆုံးထိဝင်သွားပြီ။ သူရ တင်ပါးကို ကြွပြီးညီတော်မောင်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ တင်ပါးတွေက ကြွကြွလာပြီး သူရ ဆောင့်ချက်တွေကို အားမလိုအားမရကော့ကော့လာသည်။
နန်းကလျာခမ်းက မြန်မြန်လုပ်စေချင်တာပဲဖြစ်မည်။ သူရ ကြမ်းပြီ။ ညီတော်မောင်ကို အဖုတ်လေးထဲက အဆုံးထိနီးပါးဆွဲထုတ်ပြီး ခပ်မြန်မြန်ဆောင့်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အဖုတ်အတွင်းသားတွေက တစ်ရစ်ရစ်ဆွဲယူသည်။ သူရ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ နို့သီးခေါင်းကော့ကော့ချွန်ချွန်လေးတွေကိုငုံစုပ်ရင်း အောက်ကလဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင်ဆောင့်လိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းဆီက ထွက်တဲ့အရည်တွေနဲ့ အသံတွေက တစ်ဖတ်ဖတ်ထွက်နေသည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ လက်တွေက သူရ ခါးကို အလိုက်သင့်ဖက်ရင်း တင်ပါးကြီးတွေကို ကော့ကာ အောက်ကနေကော့ကော့တင်ပေးသည်။ သူရ အချက် နှစ်ဆယ်လောက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုက်တော့ နန်းကလျာခမ်းဆီက အငမ်းမရ ကော့တင်မှုနဲ့ အတူ အသံရှည်ညည်းပြီး ရှမ်းမလေး ငြိမ်သွားသည်။ နန်းကလျာခမ်း တစ်ချီပြီသွားပြီ။ သူရ လည်း စိတ်ကိုနှစ်ပြီး ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်တာ သိပ်မကြာခင်ပဲ ညီတော်မောင်ကို အဖုတ်အတွင်းသားထဲ တစ်ဆုံးထိုးထည့်ရင်း တစ်ပတ်လောက်အောင်းထားတဲ့ သုက်ရည်တွေကို ရှမ်းမလေးအဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်သည်။ မလုပ်တာကြာပြီဖြစ်လို့ သုတ်ရည်တွေက တစ်ခါနှစ်ခါနဲ့ မပြီးပဲ လေးငါးချက် လောက်ပန်းထွက်သည်။ သူရ သုတ်တွေပန်းထုတ်ပြီး ညီတော်မောင်ကို ပြန်မထုတ်သေးပဲ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အဖုတ်လေးထဲမှာစိမ်ထားရင်း အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေ တရွရွညှစ်နေတာကို အရသာခံနေလိုက်သည်။ သူရ ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေအောက်မှ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ပူလောင်နေသော ကာမစိတ်တွေပြေပျောက်ခဲ့ရသည်။ သူရကို ရုပ်ချောသဘောကောင်းပြီး အရည်အချင်းရှိသူဟု နန်းကလျာခမ်းသိခဲ့သည်။ အခုမှ သူရရဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲမှာ ဟိုဟာလုပ်တာ တော်ကြောင်းပါ နန်းကလျာခမ်းတစ်ယောက်သေချာသိရတော့သည်။
အခုလည်းကြည့် တစ်ခါပြီးသွားသော်လည်း သူရ အတန်ကြီးက ပျော့မသွားပဲ အဖုတ်ထဲမှာ မာမာကြီးဖြစ်နေသည်။ ကလျာ့အဖုတ်လေးထဲမှာ သပ်ကြီးတစ်ချောင်းလျိုထားသလိုမျိုး ပြည့်ကြပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်နေသည်။ ”အို….။” သူရ လာပြီးနမ်းပြန်ပြီ။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို ငုံစုပ်ရင်းသာသာလေးနမ်းနေပြန်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ပါးစပ်ထဲကို သူရလျှာက တိုးဝင်လာသည်။ ကလျာ့ပါးစပ်တစ်ခုလုံးနေရာလပ်မကျန်ရအောင် သူရ လျှာက မွှေနှောက်နေသည်။ သူရအနမ်းတွေအောက်မှာ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ စိတ်တွေ တစ်ခါထပ်ပြီးထကြွလာရသည်။ ”ခမ်းလေး… ခဏထ…။” နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ချိုင်းနှစ်ဖက်ကို အသာထူမရင်း သူရပြောသည်။ နန်းကလျာခမ်းဆေးမိနေသူတစ်ယောက်လို သူရထူပေးတာခံရင်းမတ်တပ်လေးဖြစ်နေသည်။ ”ဟိုဘက်လှည့်ပြီး ကန်ဘောင်ကိုလက်ထောက်ထားနော်။” သူရ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ လက်လေးတွေကို နေရာချပေးရင်း ပြောလိုက်သည်။ နန်းကလျာခမ်းဆိုတဲ့ ရှမ်းမလေးတစ်ယောက် ဖင်လေးအပြောင်သားနဲ့ အုတ်ကန်ဘောင်ကို လက်ထောက်ပြီး ကုန်းကုန်းလေးဖြစ်နေသည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ခါးကို ခွက်ခွက်လေးဖြစ်အောင် လက်နဲ့အသာဖိချရင်း အောက်ကလည်း ပေါင်တန်ဖြူဖြူလေးနှစ်ချောင်းကြားက အဖုတ်လေးကို ညီတော်မောင်နဲ့ တေ့ထောက်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်သည်။ သူရ လရောင် အောက်မှာ ကန်ဘောင်ကို လက်ထောက်ပြီးဖင်ကုန်းပေးထားတဲ့ ရှမ်းမချောချောလေးရဲ့ ဖင်သားကြီးတွေကို ကြည့်ပြီး အားရပါးရ လုပ်သည်။ ပထမတစ်ခါပြီးထားတာမို့ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ အရည်တွေနဲ့ ချောမွေ့နေသည်။
သူရ အားမနာတော့ပဲ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေကို စုကိုင်ပြီး ဆောင့်သည်။ လက်တစ်ဖက်က ဆံပင်တွေကို စုကိုင်ထားသလို နောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်း တင်သားလုံးလုံးလေးကို တဖြန်းဖြန်းရိုက်သည်။ သူရ ရဲ့ လက်ငါးချောင်းရာက ဖွေးဥနေတဲ့ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ ဖင်သားတွေပေါ်မှာထင်နေသည်။ ပထမတစ်ခါပြီးထားတာကြောင့် သူရ တော်တော်ကြာကြာပင်လုပ်နိုင်သည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ တင်သားတွေကို ဆုတ်ချေကာ ဆောင့်နေရင်း…… ”သူရ…. မပြီးသေးဘူးလားဟာ…။ ငါတော်တော်ညောင်းနေပြီ။” နန်းကလျာခမ်းထံမှ နွမ်းလျတဲ့ အသံလေးနဲ့ ပြောတာကိုကြားရသည်။ ”အေးပါဟာ….။ ငါပြီးတော့မှာပါ..။ လာ….. ဒီမှာပဲ လာအိပ်လိုက်။” ရေကန်ဘောင်မှာ လက်ထောက်ပြီးကုန်းနေတဲ့ နန်းကလျာခမ်းကို ကျောက်ဖျာပေါ်မှာ အသာလှဲပြီးအိပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ပေါင်နှစ်လုံးကို အသာမပြီး ဗိုက်နဲ့ ကပ်ထားလိုက်သည်။ ”ခမ်းလေး … ပေါင်နှစ်လုံးကို ကိုင်ပြီးထိန်းထားနော်။’ ‘ နန်းကလျာခမ်း သူမရဲ့ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဗိုက်နဲ့ ကပ်ပြီးထားပြီးတာနဲ့ သူရလည်း နန်းကလျာခမ်းပေါ်မှာ မှောက်ချလိုက်ပြီး ညီတော်မောင်ကို အဖုတ်လေးနဲ့ တေ့ပြီး ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ”အ….။” နန်းကလျာခမ်းထံမှ ညည်းသံလေးထွက်ပေါ်လာပြန်သည်။
သူရ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးမှာ ဒိုက်ထိုးသလို ချထားပြီး နန်းကလျာခမ်းဆိုတဲ့ရှမ်းတရုတ်မလေးရဲ့ အဖုတ်ကို အပေါ်ကနေ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ချသည်။ နန်းကလျာခမ်းကတော့ မျက်နှာလေးအသာမဲ့ပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကို ထိန်းကိုင်ရင်း သူရဆောင့်ချက်တွေအောက်မှာ အလူးအလဲခံနေရသည်။ နန်းကလျာခမ်းရဲ့ပါးလေးကို နမ်းလိုက်၊ လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက်နဲ့ ခပ်သွက်သွက်ပင်ဆောင့်ချနေသလို အောက်ကလည်း ခပ်သွက်သွက်ကော့တင်ပေးနေသည်။ ဆယ်မိနစ်လောက်ဆောင့်အပြီးမှာတော့ ဆောင့်ချက်တွေမြန်လာပြီး နန်းကလျာခမ်းရဲ့ အဖုတ်လေးထဲမှာပဲညီတော်မောင်ကို ထိုးသွင်းပြီး သုက်ရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်သည်။ ”အား….. ရှီး…. ကောင်းလိုက်တာခမ်းလေးရယ်….” ” တို့လဲတူတူပါပဲ သူရ ရယ်…” နှစ်ယောက်သား ကိစ္စပြီးသွားတော့ အ၀တ်အစားတွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်ပြင်ပြီး သူရ နန်းကလျာခမ်းကို မိန်းကလေးတွေနေတဲ့အဆောင်ထိလိုက်ပို့ပေးလိုက်သည်။ အခန်းတံခါးပြန်ပိတ်ခါနီး နန်းကလျာခမ်းက သူရကို မျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ပြပြီး ဖလိုင်းကစ် ပေးသွားသည်။